Sawiro:Saldhiga Turkiga ee magaalada Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Sawiro:Saldhiga Turkiga ee magaalada Muqdisho * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By A warsame on 26th August 2017
Dowlada Turkiga ayaa magaalada Muqdisho ka dhisatay Saldhiga Milatari ee ugu weyn ee dowladaasi ku leedahay meel ka baxsan dalkeeda, waxaana saldhigan loogu tala galay in lagu tababaro Ciidanka dowlada Soomaalia.
Saldhigan Milatari oo dhismihiisa lasoo gabo gabeeyay dhawaan ayaa la filayaa in si rasmi ah xariga looga jaro,. waxaana xarig jarka saldhigan la filayaa in ay kasoo qeb galaan Madaxda sare ee dowlada Turkiga.
Dhismaha Saldhigan Milatari ayaa ku yaala Dhinaca Xeebta ee xigta Jaziira, waxaana saldhigan hada ku sugan ciidamo Turki ah oo aad u qalabeysan kuwaa oo dhawaan soo gaaray magaalada Muqdisho.
Saldhigan Milatari ee Turkiga ka dhisatay Muqdisho ayaa leh qeybo kala duwan sida qeybaha tababarada, qeybo la seexdo, goobo lagu nasto, Masaajid iyo qeybo kale , waxaana saldhigan uu ahaa mid si qurux badan loo dhisay.
AMISOM oo ka shirtay qorshaha kabixitaanka Soomaaliya
Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay dhibaatada lagu hayo Soomaalida Koofur Afrika